Blog – Buugwadaag Network
“Victory awaits him who has everything in order – luck people call it. Defeat is certain for him who neglected to take necessary precautions in time; this is called bad luck” Roald Amundsen Buuggan Great by Choice waxa wada qoray Jim Collins iyo Marten T. Hansen oo caan ku ah wax ka qoridda arrimaha hoggaaminta […]
Kitaabka 40 ee uu qoray Axmed Al-shuqayri waa buug uu ka qoray naftiisa se qofkasta oo akhriya uu ka dhex arki karo naftiisa qayb kasta oo buugga ka mid ah. Haa waad iska dhex arki kartaa waliba haddii aad ku dhaqanto waxyaabo badan oo wanaagsan ayaad naftaad ku so kordhin kartaa. Buugga 40 waxa uu […]
Buugga Colaadaha, hubka iyo codeynta doorashooyinka, dimuquraaddiyadda ee meelaha halista ah – Wars, guns & Votes – Democracy in dangerous places . Waxa qoray Paul Collier. Collier waa dhaqaaleyahan ku xeel dheer arrimaha siyaasadda bulshada iyo dhaqaalaha. Waxa uu hore u qoray buug uu ugu magac daray bottom billion oo uga jeedo dalalka afrika ee […]
Buuggan la yidhaahdo “Education For sustainable peace and conflict resilient communities” Waxbarashada oo loo adeegsado nabad waarta iyo si loo helo bulsho colaadda ka adkaysata” . Buugga waxa qortay Borislava Manojlovic, waa kaaliye Barafasoor oo aqoon u leh arrimaha xallinta colaadaha iyo nabad dhiska. Buugga waxa ay soo saartay qoraagu sannadkii 2018-kii, waxa uu ka […]
Buuggan waxa la yidhaahdaa Emerging Africa,waxaana qoray Dr. Kinngsley Chiedu Moghalu. Waxa aan halkan idin ku la wadaagi doona wixii iiga baxay dhiganahan. Buugani waxa uu ka kooban yahay afar qaybood oo waaweyn oo ah 390 bog.Waxa uu qoraagu diiradda ku saarayaa mustaqbalka iyo xaaladda dhaqaale ee Africa oo siyaabo badan wax looga qoray. In […]
Shirkadda buugaagta iyo agabka waxbarashada ee HEMA waxa ay bahda Buugwadaag ka taageertaa soo saaridda barnaamijka taxanaha ah ee Buugwadaag. Sidoo kale waxa ay akhyaarta ku xidhan barnaamijka ka caawisaa in ay u keento buugaagta ay xiiseeyaan akhriskooda.
Buuggan oo magaciisa idiinka muuqdaa yahay “The Looting Machine” waxa qoray weriyaha wargeyska “Financial Times” ee la yidhaahdo Tom Burgis. Buugani oo uu qoray saxafi reer galbeed ahi waxa uu ka kooban yahay 307 baal ama bog iyo toban cutub. Buuggu waxa uu ka warramayaa khayraadka qaaradda Afrika ee kala geddisan haddii ay tahay macdan […]
Buuggan waxa qortay Sheryl Sandberg, waxana caawiyay Adam Grant. Sheryl Sandberg waxa ay dhalatay dhammaadkii lixdameeyada sannadii 1969, waxa ay wax ku baratay waddanaka Maraykanka; kani waxa uu noqonayaa buuggeedii labaad oo hore waxa ay u qortay buugga Lean In sannadii 2013. Sheryl waxa ay ka soo shaqayasay dhawr meelood, waxa ugu caansan shirkadda Google […]
Waa buug ka kooban 450 bog una qaybsan 32 cutub oo u habaysan 4 qaybood waxa qoray Ben Rhodes oo mudo 10 sanno ah la soo shaqeeyay Barack Obama. Waxa uu si ballaadhan uga warramayaa waayihii soo maray xilligii uu Obama la-shaqaynayay iyo siday mushikiladaha u maaraaynayeen. Markii ugu horeysay ee aan la kulmo Barack […]